Casting Bronze - Casting Bronze Alloy Parts Manufacturer - Minghe Casting
Serivisy fanariana varahina - Orinasa famokarana varahina vita amin'ny vy vita amin'ny orinasa China
IATF 16949 MANKATSITRA CAST TAMIN'NY CASTING BRONZE
Inona no atao hoe fanariana alimo? Ny varahina sinoa taloha dia vita tamin'ny varahina voajanahary. Tany am-piandohan'ny Dinam-panjakan'i Shang dia azo atao ny mampiasa afo hanamboaran-tsofa varahina vita amin'ny firaka vita amin'ny varahina. Amin'izao fotoana izao, ny fomba famokarana fantatra amin'ny alimo Shinoa taloha dia mampiasa fomba fanariana mpankafy, ary alimo kely maromaro misy rafitra sarotra sy lamina sarotra no ampiasaina amin'ny fomba savoka very, fomba fanariana, fomba fantsona, sns. marika samy hafa amin'ny fitaovana.
Ny varahina Cast dia niresaka momba ny varahina varahina tamin'ny voalohany. Taty aoriana, noho ny fananganana singa mpihaza isan-karazany, nipoitra ny karazana varahina vaovao hafa noho ny varahina vita amin'ny firinga, toy ny alimo alimo, varahina silikone, varahina manganese, varahina chromium, varahina beryllium ary varahina firamainty.
Varahina Cast dia varahina ampiasaina hamokarana casting. Ny fitifirana varahina dia be mpampiasa amin'ny famokarana milina, sambo, fiara, fananganana ary sehatra indostrialy hafa, mamorona andiana alimo alimo amin'ny fitaovana vy tsy ferrous mavesatra. Ny varahina mahazatra ampiasaina matetika dia ny varahina varahina, ny varahina mitarika, ny varahina manganese ary ny alimo alimo.
Mila fanariana fitaovana vita amin'ny alimo ataon'ny mpanamboatra singa mpamokatra entana manana traikefa sy azo antoka? Minghe dia orinasa famokarana sy famokarana fantsom-bokatra any Shina, manome serivisy fanariana varahina tsara indrindra, ary manolotra fantsom-panafody vita amin'ny alimo ho an'ny rindranasa indostrialy toy ny elektronika, fitsaboana, sakafo, semiconductor, mekanika, fiara, fitaterana sy maro hafa. Miaraka amin'ny traikefa 35 taona mahery, manana ny fahaiza-manao ara-teknika sy ara-pamokarana izahay mba hamokarana faritra vita amin'ny varahina vita amin'ny laoniny izay hahafeno ny fihoaran'ny fangatahanao. Manana ny fahaiza-manao koa izahay manolotra ampahany varahina amin'ny fanariana maty, fanariana fampiasam-bola, fanariana fasika, famonoana ho faty, fikosehana, fanondrahana, fametahana masinina, ary welding.
Mifandraisa amin'ireto injenieran'ny casting casting varahina ireto anio hiresaka momba ny mombamomba ireo tetikasanao sarotra.
Ny fanariana ny varahina varahina
Ny habetsahan'ny fihenan'ny alim-bikan'ny Cu-Sn dia kely dia kely (ny tahan'ny fihenan'ny tsipika dia 1.45% ~ 1.5%), ary mora ny mamokatra casting be pitsiny miaraka amin'ny refy sy ny asa tanana misy endrika mazava. Ny fanariana varahina varahina amin'ny ankapobeny dia manampy singa toy ny zinc, firaka ary fosforus. Ny phosphate dia manana hamafin'ny hafanana, fanoherana ny fitafiana ary fananana masiaka tsara. Amin'ny varahina volo tsy mahazaka akanjo, ny atin'ny phosphore dia mety hahatratra 1.2%. Ny zinc dia afaka manatsara ny tsiranoka amin'ny alikaola ary mampihena ny fironana fanoherana ny fanavakavahana varahina varahina. Ny firaka dia manatsara ny fanoherana ny fitafy sy ny fahaizan'ny makarakara. Ny varahina fanariana atsimo dia ampiasaina ho toy ny faritra tsy mahazaka sy mahatohitra harafesina.
- Varahina phosphor vita amin'ny Tin. Phosphore dia deoxidizer tsara ho an'ny alloys varahina, izay afaka mampitombo ny tsiranoka amin'ny alikaola, manatsara ny fizotrany sy ny toetra mekanika amin'ny varahina vita amin'ny varahina, fa mampitombo kosa ny fanavahana ny fisarahana. Ny faran'izay matanjaka indrindra amin'ny phosphore amin'ny varahina varahina dia 0.15%. Rehefa be loatra, α + δ + Cu3P ternary eutectic no hatsangana, miaraka amina teboka 628 ℃. Mora ny mamokatra brittleness mafana mandritra ny fihodinana mafana ary miasa mangatsiaka fotsiny. Noho izany dia tsy tokony ho lehibe mihoatra ny 0.5% ny votoatin'ny phôforôra ao amin'ny varahina volo tsy manjary, ary ny fôsidôra dia tokony ho latsaky ny 0.25% mandritra ny asa mafana. Ny varahina varahina misy pososy dia fitaovana elastika fanta-daza. Mandritra ny fanodinana dia ilaina ny mifehy ny haben'ny voam-bary alohan'ny hiasa mangatsiaka sy ny fanamoriana hafanana ambany aorian'ny fikarakarana. Ny tanjaka, ny modulus elastika ary ny tanjaky ny havizanana amin'ny akora voadidy tsara dia avo kokoa noho ny an'ny akora voadidy voamadinika, saingy ambany ny plastika. Ny fitaovana miasa mangatsiaka dia ampidirina amin'ny hafanana ambany 200-260 ° C mandritra ny 1 ka hatramin'ny 2 ora mba hamokarana vokarin'ny fanamafisam-peo, izay afaka manatsara kokoa ny tanjaka, ny plastika, ny fetran'ny elastika ary ny modulus elastika an'ny vokatra, ary hampitombo ny fahamarinan-toerana ny elasticity.
- Varahina tin-zinc. Zinc marobe no levona ao amin'ny firaka varahina-vy, ary ny habetsahan'ny zinc ampidirina amin'ny varahina vita amin'ny vinaingitra dia matetika tsy mihoatra ny 4%. Ny zinc dia afaka manatsara ny fahamendrehan'ny firaka, manenjana ny maripana amin'ny crystallization ary mampihena ny fisarahana mihodina.
- Varahina firaka Tin-zinc. Ny firaka dia tsy levona amin'ny firaka varahina. Nozaraina teo amin'ireo dendrites ho dingana tokana, fampidirana mainty. Ny fizarana ny firaka ao anaty ingot dia tsy mora ny manao fanamiana, mazàna manampy kely ny nikela dia afaka manatsara ny fizarana azy ary manadio ny rafitra. Ny firaka dia mampihena ny coefficient misy ny varahina varahina, manatsara ny fanoherana sy ny fahaizan'ny masinina, saingy mampihena kely ireo toetra mekanika. Ny 3% ka hatramin'ny 5% ny zinc dia matetika ampidirina amin'ny firaka varahina-firamainty mba hanatsarana bebe kokoa ireo toetra mekanika. Manampy 0.02% ～ 0.1% zirconium na 0.02% ～ 0.1% boron, indrindra ny fanampiana 0.02% ～ 0.2% ny singa tsy fahita eto an-tany dia afaka manadio ireo sombin-kazo mitarika sy mizara azy ireo mitovy, mba hanatsarana ny firafitra, ny fanariana ary ny toetra mekanika an'ny firaka misy varahina varahina.
Ny fanariana ny alimo tsy misy firapotsy
- Ny famafazana firamainty dia manana toetra mekanika avo lenta, fanoherana ny harafesina, fanoherana mitafy, fahamendrehana tsara ary afaka mandefa casting matevina.
- Ny fanariana varahina manganese amin'ny ankapobeny dia ampiana alimo, vy, nikela ary singa hafa, izay mahazaka harafesina sy mahatohitra hafanana, ary mety amin'ny fanaovana ampahany miasa amin'ny maripana ambony.
- Ny alimo alimo vita amin'ny alim-by dia matetika ampiana vy, manganese, nikela ary singa hafa, izay mety amin'ny fanaovana ampahany matanjaka sy mahery tsy mahatohitra.
Ny firafitry ny simika sy ny fampiasana ny varahina mahazatra
Brand Famoronana nominal / / fampiharana
Ireo faritra tsy mahazaka akanjo izay miasa eo ambanin'ny enta-mavesatra be sy ny hafainganam-pandeha avo
Casting miendrika sarotra, valves, body pump, gears, turbines, sns.
Fitaovana ara-drafitra, kojakoja manohitra ny harafesina ary tsy mahazaka asidra
Sombiny izay miasa ao anatin'ny fepetra fikorontanana, toy ny kirihitra, valizy, sns.
Ireo faritra mahazaka sy mahatohitra harafesina izay miasa ambanin'ny enta-mavesatra sy ny hafainganam-pandeha mihetsiketsika
Fiara sy faritra hafa mavesatra andraikitra
Fizarana tsy mahazaka asidra, ampahany amin'ny asa fanerena be
Bearings amin'ny hafainganam-pandeha avo sliding sy ny akanjo ankapobeny akanjo
Sleeves sombin-tànana sy ny faritra matanjaka tsy azo avela ary tsy mahazaka tsindry ho an'ny milina mavesatra
Casting-tahan'ny fanoherana herinaratra avo lenta sy faritra fanoherana ny fitafiana ary fanoherana
Miorina amin'ny harafesina, fanamafisana tanjaka avo lenta, ampahany maharitra mahatohitra izay miasa amin'ny 400 ° C
Minghe Casting, any Dongguan, Sina, dia manana fitaterana mety. Mandray anjara mavitrika amin'ny fanariana sy fanodinana mari-pahaizana manokana amin'ny alimo varahina sy alimo aluminium. Ny isa vita amin'ny varahina varahina dia misy alimo alimo, varahina vita amin'ny silikone, varahina alimo, varahina nikela aluminium, varahina vita amin'ny varahina, varahina manganese, varahina mena, varahina, sns. C94400, C95800, C83600, 10-2, 9-2, CuAl5Sn5Zn5, CuAl9, CuAl9Fe, sns. Etc., miaraka amin'ny mpandinika spektrum fitaovana fanadinana matihanina mba hiantohana ny fahamarinan'ny firafitry ny akora simika ao amin'ilay fitaovana. Ny fitaovana fanodinana dia ahitana fitaovana fanodinana feno toy ny lathes ankapobeny, milina fanaovana fikosoham-bary, CNC, ivon-toeram-pivarotana, sns.
Ny fanadihadiana momba ny raharaha Minghe momba ny fanariana alimo
Safidio ny mpamatsy Casting Bronze tsara indrindra
Amin'izao fotoana izao, ny ampahany amin'ny fanariana varahina dia aondrana any Amerika, Kanada, Aostralia, Fanjakana Mitambatra, Alemana, France, Afrika atsimo, ary firenena maro hafa manerantany. Izahay dia ISO9001-2015 voasoratra anarana ary voamarin'ny SGS ihany koa.
Ny serivisy fanamboarana varahina mahazatra dia manome casting an-dàlana maharitra sy mora vidy izay mifanaraka amin'ny antsipirihanao momba ny fiara, ny fitsaboana, ny aerospace, ny elektronika, ny sakafo, ny fananganana, ny fiarovana, ny ranomasina ary ny indostria maro kokoa. Haingana handefa ny fanontanianao na handefa ny sarinao mba hahazoana teny maimaim-poana amin'ny fotoana fohy indrindra. Mifandraisa aminay na mailaka sales@hmminghe.com hijerena ny fomba ahafahan'ny olonay, ny fitaovana ary ny fampitaovana mitondra kalitao tsara indrindra amin'ny vidiny tsara indrindra ho an'ny tetik'asa fanariana alimo.